चुराेट र सूर्तिकाे लत छाेड्न यस्तो उपाय अप्नाऔं – Lokpati.com
केपी शर्मा ओली राशिफल सरकार प्रधानमन्त्री पक्राउ अमेरिका नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी मृत्यु प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन अपराध
चुराेट र सूर्तिकाे लत छाेड्न यस्तो उपाय अप्नाऔं
काठमाडौं। धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि धरै मानिसले यसको लत छाड्न सक्दैनन्। धुमपान त्याग गरेमा हृदयाघात, रक्तनली सम्बन्धी समस्या, क्यान्सर तथा मष्तिष्काघातबाट मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ।
धुमपान छाड्न चिकित्सकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथी तथा सहकर्मीबाट सहायता या प्रोत्साहन लिन सकिन्छ। धुमपान सेवन त्याग गरेपछि हुने तनावबाट कसरी मुक्त हुने भन्नेबारे औषधि तथा अन्य साधनाका बारेमा पनि चिकित्सकबाट सहयोग लिन सक्नहुन्छ।
धुमपान छाड्नुभन्दा पहिले छाड्ने संकल्प गर्नुहोस्। धुम्रपान पछि सिकेको बानी हो, जसलाई तपाईंले भुल्न सक्नुपर्छ। धुमपान सेवन गर्न त्यति सहज छैन, तर त्यसप्रति गम्भीर हुनसक्नुपर्छ। धुमपान छाड्ने तयारीसम्बन्धमा निम्नलिखित उपाय अवलम्बन गर्नुहोस्।
आफूले हरेक दिन सेवन गर्ने चुरोटको संख्या घटाउनुहोस्। प्रत्येक पटक सेवन गर्दा केवल आधा मात्र चुरोट सेवन गर्नुहोस्। दिनमा सकेसम्म धेरै घण्टाको फरकमा मात्र सेवन गर्नुहोस्। एस्ट्रे सफा राख्नुहोस् र एकपछि एक गर्दै टाढा राख्दै जानुहोस्।
चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थको गन्ध आउने कपडा, घर, अफिस,गाडी वा अन्य सामग्रीहरु सफा र गन्धमुक्त राख्नुहोस्। धुमपान तथा सूर्ति सेवन छाड्न कोही साथी तथा श्रीमतिलाई पनि सँगै छाड्न मनाउनुहोस्। धुमपान तथा सूर्ति सेवन छोड्नुभन्दा पहिले शारिरिक व्यायाम शुरु गर्नुहोस्। अतिरिक्त लाइटर भएमा फ्याँक्नुहोस्।
कसरी छाड्दै जाने ?
यदि तपाईलाई साथीसँग बसेर चुरोट सेवन गर्न मन लाग्छ भने अबदेखि एक्लै सेवन गर्नुहोस्। आफूले किन धुमपान तथा सूर्ति सेवन गरिरहेको छु भन्ने सोच्नुहोस्। जुन कुराले धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न पे्ररित गरिरहेको छ, ती कुराबाट बच्ने कोशिस गर्नुहोस्। आफूले धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन छाड्नुपर्ने ५ कारण लेख्नुहोस र ती कारणहरु हरेकदिन पढ्नुहोस्।
धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन छाड्ने मिति तोक्नुहोस् र त्यो दिनसम्म सेवनलाई बिस्तारै कम गर्दै लैजानुहोस्। तोकेकोे दिनमा पूर्ण रुपमा धुमपान तथा सूर्ति सेवन बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाई कामको बेला वा अफिसको बेला मात्र सेवन गर्नुहुन्छ भने बिदाको समयमा मात्र सेवन छोड्नुहोस् ।
धुमपान तथा सूर्ति सेवन छाड्ने दिनमा
आफूसँग भएको चुरोट तथा सूर्ति, लाईटर र एस्ट्रे फ्याँक्नुहोस्। धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन त्याग्न साथीहरु तथा परिवारका सदस्यलाई सहयोग गर्न भन्नुहोस्। त्यस दिनका लागि योजना बनाउनुहोस, जुन दिन व्यस्त हुनु हुनेछ। त्यस्तो ठाउँमा जानुहोस् जहाँ धुम्रपान तथा सुर्तिसेवन मनाही छ, उदाहरणका लागि पुस्तकालय वा सिनेमा हल। आफ्नो दिनचर्या बदल्नुहोस्।
पानी पिउनुहोस् तर दिनभरिमा दुई लिटरभन्दा बढी होइन। यसले तपाईंको शरीरको रसायनलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। तलतलबाट मुक्त हुन चिनीरहित चुईंगम, चकलेट अथवा अन्य कुनै खानेकुराहरु मुखमा राख्नुहोस्। लामो तथा गहिरो सास लिने अभ्यास गर्नुहोस् र दिमागलाई आराम हुने टेपहरु सुन्नुहोस्।
करिव ३० मिनेटजति व्यायाम गर्नुहोस्। नियमित रुपमा खाने खाना खानुहोस्। चुरोट तथा सूर्ति खरिदका लागि खर्च हुने रकम बचत गर्न छुट्टै खुत्रुकेको व्यवस्था गर्नुहाेस्। चुरोट तथा सूर्ति सेवन नगरेको हुनाले दिनको अन्त्यमा आफैंलाई धन्यवाद दिनुहोस्।
केही दिन तथा हप्ता सम्ममा तपाईं चुरोट तथा सूर्ति सेवन छाडेको कारणबाट देखिन सक्ने केही लक्षणबाट मुक्त हुँदै जानुहुनेछ। रिस उठ्ने तथा झकर्नेजस्ता लक्षणबाट मुक्त हुन कसरत तथा व्यायाम गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई भित्री मनदेखि नै चुरोट तथा सूर्ति सेवन छाड्न मन लाग्न थाल्नेछ।
चुरोट तथा सूर्ति सेवन गर्न तलतल लाग्नेबित्तिकै विस्तारै तथा गहिरोसँग लामो श्वास लिनुहोस, जसले तपाईंको तलतल हटाउने छ। आफ्नो दिमागबाट चुरोट तथा सूर्ति सेवनसम्बन्धी याद हटाउनुहोस्। आफ्नो काममा बढी केन्द्रित हुनुहोस्। आफूले चुरोट तथा सूर्ति सेवन नगरेको दिन भित्ते पात्रोमा चिन्ह लगाउँदै जानुहोस् र आफूले आफैंलाई धन्यवाद दिनुहोस्।
चुराेट र सूर्ति
कस्तो बन्दैछ नयाँ ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’ ?
आज बाेल्दिनँ, भाेलि जवाफ दिन्छु